ကောင်းကင်ကို: 12/01/2011 - 01/01/2012
ကော်ပီ + ကြော်ငြာ
“ကိုယ့်နှလုံးသားလေးလည်း ရင်ခုန်နှုန်း ထိန်းဖို့ခက်ပြီ… ငြိမ်အောင် တင်းထားလို့မရ၊ မယုံနိုင်ဘူး မင်းနဲ့တွေ့စဉ်…ဒါ အချစ်လို့ခေါ်မလား…ကိုယ်မသိလိုက်မီ…”
ဒီ အမေရိကန် တော်တော် တုံးတာပဲ။ ကျနော် ကြိတ်တွေးရင်း စိတ်ထဲကနေ ရယ်လိုက်တယ်။ ဒီ အမေရိကန် တော်တော် တုံးတာပဲ။
“မင်းတို့ မြန်မာတွေ melody တခုကိုတောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မဖန်တီးချင်ဘဲ သူများတွေဆီက အလွယ်တကူ ခိုးချနေကြတယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို အဲဒီ့ အမေရိကန်ရဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ရလို့ ကျနော် ရယ်ချင်သွားတယ်။ ဒီလူဟာ အစဉ်အလာ သမားပဲ။
ကျနော်သာ အားမနာတတ်လို့ ကတော့ သူ့ကို တခွန်းတည်း ပြောလိုက်မယ်။ “Reinventing the wheel” ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးလားလို့။ အချိန်ကုန်ခံပြီး ဘီးကို ဘာလို့ အစကနေ ပြန်တီထွင်နေမလဲ။
ထမင်းစားဖို့ စပါးကို ကိုယ်တိုင် စိုက်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ဆန်ကောင်းကောင်း သန့်သန့်လေးတွေ ဝယ်ပြီး ချက်လိုက်ရင် နူးညံ့တဲ့ ထမင်းတပွဲတော့ ဖြစ်လာနိုင်တာပဲ။
ဆောရီးပါ မစ္စတာ အမေရိကန်။ ကျနော်တို့ ဘာမဟုတ်တဲ့ emotion လေးတွေ ကို ဖော်ကျူးဖို့ အချိန် အများကြီး မပေးနိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ဆီက လူတွေ လုပ်ပြီးသား ဟာလေးတွေကို အသာလေး အညွန့် ခူးစားလိုက်ရုံပဲ။ မြန်မာဆိုပြီး အထင်သေးမယ်တော့ မကြံနဲ့။ မြန်မာတွေ ဘယ်တုန်းကမှ မညံ့ခဲ့ဘူး။ မြန်မာဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ အဖြူတွေ၊ Black အမေရိကန်တွေ ရဲ့ ဦးနှောက်ကိုတင် မကဘူး၊ Chinese တွေ Indian တွေ၊ ကိုရီးယားတွေ၊ ထိုင်းတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကိုပါ အလွယ်တကူ ဖောက်စားနေတာ။
အထောက်အထားနဲ့ ပြောတတ်တဲ့သူဆို မြန်မာတွေဆိုတာ ဦးနှောက်ဖောက်စားခြင်း အတတ်ကို မြဝတီမင်းကြီး ဦးစ လက်ထက်ကတည်းက တတ်မြောက်နေတဲ့ အကြောင်း ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာတောင် ရှင်းပြလိမ့်ဦးမယ်။
ရှိပြီးသား Melody တွေမှာ စာသားလေးတွေ ကောက်ထည့်လိုက်တော့ရော ဘာဖြစ်လဲ?
Efficient ဖြစ်တာပေါ့။ Productive ဖြစ်တာပေါ့။ အလဟဿ အချိန်တွေ မကုန်တော့ဘူးပေါ့။
စာသား၊ အဆို နဲ့ လိုက်ပြီးတီးခတ်ထားပုံကလွဲရင် နဲ့ အားလုံး ကောင်းဖို့ ရာနှုန်းပြည့် သေချာသွားတာပေါ့။
ဝမ်းနည်ပါတယ် မစ္စတာ အမေရိကန်။ ကျနော်တို့က ငအတွေ မဟုတ်ဘူး။ စေ့စပ်တယ်။ ရာနှုန်းပြည့် သေချာမယ့် အလုပ်မျိုးကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
“ကမ္ဘာမကြေဘူး…ငါတို့ သွေးနဲ့ရေးခဲ့ရတဲ့ မော်ကွန်းတွေ….တော်လှန်ရေး….ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ အတွင်းမှာ ကျဆုံးသော”
ဗဟုသုတ နည်းတဲ့ ထိုင်းတယောက်က လာမေးတော့ ခံစားချက်လေးတွေ ပျောက်သွားတယ်။ ထပြီးသား ကြက်သီးလေးတွေလည်း ပြန်ဝင်သွားတယ်။
သူမေးတာကိုလည်း ကြည့်ဦး။ “မမြဲခြင်း တရားကို ဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းကို မင်းတို့က ဘာလို့ လက်သီး လက်မောင်းတွေ တန်းပြီး၊ အံတွေ ကြိတ်ပြီး ဆိုနေကြတာလဲ” တဲ့။ မူရင်း အင်္ဂလိပ် သီချင်းက အနိစ္စတရားကို ဖွဲ့ထားတာကိုး။
စိတ်လေတယ်။ စဉ်းစဉ်းစားစား မမေးဘူး။ အနိစ္စတရားကိုတော့ ဘယ်သူက သွားပြီး လက်သီးလက်မောင်း တန်းနေမှာလဲ။ ဒီသံစဉ်ကို ကော်ပီလုပ်ရင် ဒီအဓိပ္ပါယ်ပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ သူ့ဖြုတ်ဦးနှောက်လေးက တရားသေ တွေးထားလား မသိပါဘူး။
အနိစ္စ သီချင်းက ကမ္ဘာမကြေတဲ့ သီချင်း ဖြစ်သွားတော့ရော ဘာဖြစ်သေးလဲ။ လူတွေ တက်ကြွလာအောင် လှုံဆော်နိုင်ရင် ပြီးတာပဲ။
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးသီချင်းက ဇီးထုပ်ကြော်ငြာ သီချင်း ဖြစ်သွားတော့ရော ဘာအရေးလဲ။ အဲဒါဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ကျင့်သုံးနေတဲ့ “Win-Win Strategy” ပဲ။ ကြည့်တဲ့သူတွေလည်းကြိုက်၊ ကြော်ငြာတဲ့သူလည်း စီးပွါးဖြစ်တယ်လေ။
အမယ်… ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းကို ကြော်ငြာ သီချင်းလုပ်လိုက်လို့ တနပ်စားဥာဏ်လို့တော့ လာမပြောနဲ့။ Mr. Bean ဇာတ်ကား ကြည့်ရသလို ရယ်ပစ်လိုက်မယ်။
မသိရင် မှတ်ထား။ ကိုစန်းအောင် ဆိုတဲ့လူဆိုရင် ၁၉၉၄- ၉၅ ခုလောက်တုန်းက ကြော်ငြာသီချင်း အတိုလေးတွေကို စုပြီး သီချင်းခွေ အဖြစ် ထုတ်လိုက်တာ ရောင်းရသဗျာ။ အိမ်နားက သီချင်းခွေ အငှားဆိုင်မှာတောင် တင်လိုက်သေးတယ်။ ဘယ်လောက်ဟန်ကျလဲ။ ကြော်ငြာ ရိုက်တုန်းကလည်း ပိုက်ဆံရ၊ ခွေထုတ်တော့လည်း ကြော်ငြာရှင်တွေ ဆီက ပိုက်ဆံရ၊ ခွေရောင်းရတာကလည်း ပိုက်ဆံရသေးတယ်။ ဒီတော့ တနပ်စားဥာဏ်လို့ လာမပြောနဲ့။ အမြင်ကျယ်ကျယ် ထားစမ်းပါ။ မျက်တောင်မွှေး တထောက်စာလေးတင် ကြည့်ချင်တဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ကြပါ။
ကြော်ငြာအကြောင်းစဉ်းစားမိတော့ မြန်မာပြည်က တီဗွီ အစီအစဉ်မှာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းကမှ စပြီး ကြော်ငြာတွေ ထိုးခွင့်ရတာကို သတိရမိတယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကျမှ တီဗွီကြော်ငြာတွေ စလုံးရေစ ခဲ့ရလို့ မြန်မာတွေ ကြော်ငြာရဲ့ အရေးပါပုံကို အသိနောက်ကျ လှချည်လားလို့တော့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ငါတို့ မြန်မာတွေဟာ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကတည်းက ကြော်ငြာရဲ့ အရေးပါပုံကို သိပြီးသား ဖြစ်သလို ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်လည်း ကြော်ငြာ တတ်ပြီးသား။
ဖတ်ပြီး ပီတိတွေ ဖြစ်ပြီး မျက်ရည်တောင် ဝဲချင်သတဲ့။ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ “ငါ၏ ယာလက်ဖြင့် ဆန်စပါးရိက္ခာ ကိုပေးအံ့။ ငါ၏ လက်ဝဲလက်ဖြင့် ဝတ်စားတန်ဆာ ကိုပေးအံ့။ အမိသည် သားငယ်ကို ရင်ခွင်၌ နှစ်သိမ့်စေသကဲ့သို့ ငါသည်လည်း တိုင်းသူပြည်သားတို့ကို နှစ်သိမ့်စေအံ့” တဲ့။ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့ ကြော်ငြာ။
အဲ့လို အလုံးမျိုးတွေ၊ အဲဒီ့ထက် ကောင်းတဲ့ အလုံးတွေ ကတော့ ခုခေတ် သတင်းစာတွေ မှာလည်း တွေ့နိုင်တာပဲ။ မျက်ရည်မဝဲခင်မှာ... ကျန်စစ်သားမင်းကြီးက သူပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း တကယ်ရော လုပ်ခဲ့လား ဆိုတာတော့ စဉ်းစားကြည့်မယ် မရှိဘူး။ အပြောကောင်းတိုင်း မျက်ရည်ဝဲနေရလို့ ရှားရှားပါးပါး မျက်ရည်တွေ ခန်းကုန်မှဖြင့် နှမြောစရာ။
မင်းတုန်းမင်းကြီးကလည်း သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးသလိုလိုနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ အဝေဖန် ခံနိုင်ကြောင်း ဒီလို ကြော်ငြာဖူးတယ်။
“ငါမကောင်းလျှင် ငါ့ကိုရေး၊ ငါ့ မိဖုရားမကောင်းလျှင် ငါ့မိဖုရားကိုရေး၊ မင်းတို့မှာအပြစ်မရှိစေရ” ကြည့်ရတာ “မင်း” တို့မှာ အပြစ်မရှိစေရ ဆိုတဲ့ စာကြောင်းထဲက “မင်း” ဆိုတာက ရှင်ဘုရင် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆိုလိုတာ ထင်ပါတယ်။
အရွယ်အစားတောင် တတောင့်နဲ့ တတောင့် တူအောင် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာလည်း တန်ခိုးတော် အနန္တ…..ကြော်ငြာတွေအရ
အေအိုင်ဒီအက်စ် ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ဆေးကို သုတေသနတောင် မလုပ်ပဲ လက်တန်းဖော်စပ် နိုင်တာ၊ အရင်ဆုံး ဖော်စပ်နိုင်တာ မြန်မာတွေ…..ကြော်ငြာတွေအရ
“သင်တန်းသားဦးရေ ကန့်သတ်ထားသည်။ လာအပ်သလောက်သာ လက်ခံမည်” ဒါကတော့ သင်တန်းကြော်ငြာမှာ ဆီလျော်အောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထပ်ဖြည့်လိုက်တာ။
ကြော်ငြာတွေက ညာကြတာများတော့ လူတွေက မကောင်းဘူးလို့ မြင်လာကြရော။ တကယ်က ကြော်ငြာဆိုတာ လိမ်ချင်သူနဲ့ အလိမ်ခံချင်သူကြားမှာ ပေါင်းကူးပေးတဲ့ အရာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ပေးချင်သူနဲ့ လိုအပ်သူကြားမှာ ပေါင်းကူးပေးတဲ့ အရာလည်း ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲ။
တောက်တွေးမြောက်တွေး လုပ်နေတာကို အသံနေ အသံထား တခုက လှုပ်နှိုးလိုက်တယ်။
“စားကြည့်။ အရသာခံကြည့်။ မကြိုက်ရင် ပိုက်ဆံမပေးနဲ့” အဲဒါက ဈေးသည်တယောက်ရဲ့ ကြော်ငြာ။
“လာလော့၊ ရှုလော့။ လုပ်ကြည့်ပြီး ကြိုက်မှ လက်ခံ့” အဲဒါကိုတော့ ကြော်ငြာခံရသူကို အကျိုးရှိစေမယ့် ကြော်ငြာလို့ မိတ်ဆွေ တယောက်က သုံးသပ်ဖူးတယ်။
ကဲ…ရေးတာလည်း တော်တော် ရှည်သွားပြီ။ သူငယ်ချင်း ... စာဖတ်လိုက်ရလို့ မျက်လုံးတွေ ညောင်းသွားပြီလား။ ဒါဆိုရင် အပြင်ကို ထွက်လိုက်။ ပြီးတော့ မိုးပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်စမ်း။ ကောင်းကင်ဘုံကို တွေ့ရဲ့လား? ဘုရားသခင်ရဲ့ ကြော်ငြာကို?
Posted by Kaung Kin Ko at 10:42 AM7comments: Links to this post
Labels: သရော်စာများ, အတွေး
"သူ" ဘယ်သူလဲ သိချင်ရင်တော့ ကောင်းကင်ရဲ့ အရောင်ကိုသာ ကြည့်လိုက်
မေးခွန်းတွေ ဦးနှောက်ကို တံခါးလာခေါက်နေတယ်။
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ စာရင်းထဲမှာ သူ့ကို ဘာကြောင့် ထည့်မထားကြတာလဲ?
သူ့အတွေးအခေါ်တွေထဲမှာ ကြိုက်တာလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ မကြိုက်တာလေးတွေလည်း ရှိတယ်။
လူတွေက သူ့ကို အစဉ်အလာကို ဖျက်ဆီးရက်သူလို့ မြင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေရဲ့ အမြင် ဆိုတာကို ခေါက်ထားလိုက်ပါ။ လူအုပ်ကြီးဆိုတာက လူအုပ်ကြီး နောက်ကို လိုက်ရင်း လမ်းပျောက်နေတတ်ကြပေမဲ့ အရေအတွက်ကို ကြည့်ပြီး လမ်းမှန်ရောက်နေပြီလို့ ထင်နေကြတဲ အခါမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။
ကျနော်ကတော့ သူ့ကို အစဉ်အလာတွေထဲကနေ စစ်ထုတ်ပြီး အမှန်တရားကို ကြိုးစား ရှာဖွေနေသူလို့ မြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်အမြင်ကိုလည်း ခေါက်ထားလိုက်ပါ။ ကျနော်ဆိုတာကလည်း စည်းပြင်ကလူ
“သူ” ကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ပစ္စုပ္ပန် သမားတဲ့။ ထားတော့။
လက်သည်းကြားမှာ အပ်စိုက်၊ တူနဲ့ရိုက်ပြီး လက်“မတွန့်” တဲ့သူကို သူရဲကောင်း ရွေးခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ ဟုတ်ခဲ့သည် ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်ခဲ့သည် ဖြစ်စေ ထားလိုက်တော့။ အခုခေတ်မှာ အဲဒါကို အတုယူနေဦးမယ် ဆိုရင် ဟာသတပုဒ်လို ဖြစ်သွားပြီ။ Originality တွေ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ခေတ်မှာ တကယ်လိုနေတာက ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို လိုအပ်တယ်ထင်ရင် ခွဲထွက်ရဲတဲ့ သတ္တိပဲ။
မိုးကြိုးပစ်မှတ် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်” လေ။
အများဆန္ဒတဲ့။ ဆွဲဆောင်အား ကောင်းလွန်းတဲ့ စကားလုံးမှာ အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ သဘောတရားတွေ ရှိနေတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှောင်ခြမ်းကိုလည်း စဉ်းစားခန်း ဝင်ကြည့်ဖူးတယ်။
ဂျော်ဒါးနိုး ဘရူနိုဟာ ကိုပါးနီးကပ်စ်ရဲ့ အယူအဆတွေကို ဖြန့်လို့ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခံခဲ့ရတယ်။ (အများဆန္ဒအရ)
ဆိုကရေးတီးဟာ အဆိပ်သောက်ခဲ့ရတယ်။ (မဲခွဲဆုံးဖြတ် အပြီး)
ဟစ်တလာရဲ့ ပါတီဟာ အနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးတော့ ဟစ်တလာဟာ အာဏာရှင် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ (ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလဒ်)
ဒါဆိုရင် အများဆန္ဒအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဆိုတာကလည်း သူ့အားနည်းချက်နဲ့သူ။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာမှာတောင် သူ့အားနည်းချက်နဲ့သူ။
စွန့်လွှတ်ရခြင်း အတူတူမှာ ကွာခြားမှုတွေ အများကြီးတော့ ရှိလိမ့်မယ်။ စွန့်လွှတ်သူတွေ ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ကွားခြားမှုတွေ ရှိနေလိမ့်မယ်။ အကျိုးဆက်မှာလည်း ကွာခြားမှုတွေ ရှိနေလိမ့်မယ်။
ခရစ်တော်ဟာ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့တယ်။
“သူ”ကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်လို့ ခေါ်ရမလား၊ အဲဒီ့ “ဘဝတက္ကသိုလ်” မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက် ရောက်ရှိသွားခြင်းပါလဲ?
“သူ” က ချေပဖူးတယ်။ ကိုယ်အသေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရှုထောင့်တခုကနေပဲ ကြည့်ရင်တော့ တခြား ယုံကြည်ချက်တွေလည်း တွေဟာလည်း စံနှုန်းနဲ့ လွဲနေကြမှာပဲ။ အဲဒီ့ထဲမှာမှ သူ့ကို ဘာလို့ ကွက်ပြီး အရေးယူရသလဲလို့။
ဟိုဘက်မှာကလည်း အဖြေက အဆင်သင့်။ Enlightened man တပါးရဲ့ နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း။
ဒါဆိုရင် Enlightened man ဖြစ်တဲ့ အရှင်မြတ်ဟာ ဘာတွေ ဟောကြားခဲ့ပါသလဲ။
ကိုယ့်မှတ်စုလေး ကိုယ်ပြန်ပြီး ထုတ်ဖတ်ကြည့်တယ်။
[[[ ကျနော့်မှာ အပြောအဆို ကြမ်းတဲ့ ဘာသာမဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ရှိတယ်။ သူက ရိုးသားပြီး ကူညီတတ်ပေမယ့် ပိဿလေးနဲ့ ပစ်သလို ပြောတတ်တယ်။
“ဘာမှ လာငြင်းမနေနဲ့။ အဲဒါ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကမြွက်တော်”
“ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကမြွက်တော်လို့ ပြောရအောင် မင်းက ဘုရားသခင်နဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် အတူတူ ထိုင်ဖူးလို့လား”
သူ့ဥပမာက ကြမ်းလွန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ကတော့ ဒီနေ့အထိ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲမှာ မိုးခြိမ်းနေတုန်း။ ]]]
[[[ အဲလို မက်ဆေ့မျိုး ကို ရှေးခေတ်က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ရနိုင်တယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်မျက်လုံးကို စည်းထားတဲ့ အဝတ်ကိုတောင် မြင်ရတာမှ မဟုတ်တာ။]]]
နောက်ဆုံးတော့ လူတွေဟာ ဘုရားတွေကို ကိုယ့်ထင်ကြေးအတိုင်း ပြန်ပြီး ဖန်ဆင်းနေရတာပါပဲ။ ယန်းပေါဆတ် (Jean Paul Sartre) ပြောသလိုပေါ့။ ကျနော်တို့ အားလုံး လွတ်လပ်မှုဒဏ်ကို အဲလောက်ထိ ကျခံနေရပါတယ်။]]]
စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ဒီလိုမျိုးလည်း ဖြစ်နေပြန်သေးတယ်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် တယောက် ရှိခဲ့တယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီ့ ပညာရှင် ပြောခဲ့တယ် ဆိုတာတွေကို တဆင့် ပြန်ပြောပြတဲ့ သူတွေဆီက သိရတဲ့ စကားတွေဟာ တမျိုးစီ ဖြစ်နေတယ် ဆိုပါစို့။
ကျနော်က အဲဒီ့ နိုင်ငံရေး ပညာရှင် အကြောင်း ပြောမယ်။ “အဲဒီ့ ပညာရှင်ဟာ အရမ်းတော်တယ်လို့ လူတွေက ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဘာတွေ ပြောခဲ့မှန်းတော့ ငါလည်း သိပ်သိတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဟို A ဆိုတဲ့ တယောက်ကတော့ အဲဒီ့ နိုင်ငံရေး ပညာရှင် ဟာ ဒီလို ပြောသွားခဲ့တယ်လို့ ကျိန်းသေကြီးကို ပြောတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ငါယုံတယ်။ A ပြန်ပြောပြတာကမှ ဟိုနိုင်ငံရေးပညာရှင် ရဲ့ တကယ့် စကားအစစ်။ အဲဒါက လွဲရင် အမှားတွေ။ ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ A ပြောတာကိုပဲ ကျနော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက သိလာလို့။
(ဒါပေမဲ့ တကမ်တမ်းကျ တဆင့် ပြန်ပြောတဲ့ A ကလည်း သေချာသိတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ကလည်း သေချာသိတာ မဟုတ်ဘူး။ A ပြောတာကမှ အမှန်ဆိုရင်လည်း တကမ္ဘာလုံးက ဟာတွေက အမှားလို ဖြစ်သွားမယ်။)
နောက်တယောက်ကလည်း ကျနော့်လိုပဲ ပြောမယ်။ ဒါပေမဲ့ အယူအဆချင်းကတော့ မတူဘူး ဖြစ်နေပြီ။ ဒါဆိုရင် ဘယ်ဟာက အမှန်လဲ? ထားပါတော့။ ခေါင်းရှုပ်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ရ ခက်တာချင်း အတူတူ ဒီနေရာ ဒီဒေသမှာ ရေများရင် ရေကို အနိုင်ပေးလိုက်တာက ငြိမ်းချမ်းပါတယ်။ ဒါ အထူးအဆန်းမှ မဟုတ်တာ။ ဟိုဒေသမှာလည်း မီးများရင် မီးကို အနိုင်ပေးနေတာပဲလေ။
ဒါဆိုရင် ကျနော့်ရဲ့ ဇာတ်လိုက် “သူ” ဟာ မှားသွားပြီပေါ့။ ရှိစေတော့။
“သူ” ပြောခဲ့တာတွေ မှားတယ် ဆိုရုံနဲ့ သူ့ကို အကျဉ်းချသင့် ပြီလား။ "သူ" က အသက်လည်း တော်တော်ကြီးလှပြီ။ "သူ" နဲ့ စကားပြောဖူးတဲ့ ညီမလေး တယောက်ကတော့ "သူ"ဟာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြတတ်တဲ့ စည်းရုံးတတ်တဲ့ အဘိုးတယောက်နဲ့ တူတယ်လို့ တင်စားဖူးတယ်။
သူအကျဉ်းကျနေရခြင်း အကြောင်း၊ ဟိုတစ ဒီတစ အသိလေးတွေနဲ့ ကျနော် စာလုံးပေါင်းကြည့်တယ်။
1. တဘက်မှာ သူ့ကို ချေပခွင့် ရှိသလား။ သူမှားကြောင်း ထောက်ပြခွင့် ရှိသလား။ [မီဒီယာ ပေါင်းစုံသုံးပြီး ချေပခွင့် ရှိတယ်။ သူ့မှာသာ ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေကနေ အပြန်အလှန် ချေပခွင့် မရှိတာ။ သူ့အယူအဆ တွေကိုလည်း ပုံနှိပ် ဖြန့်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်ထားတယ်] အဲဒီ့လောက် လုပ်တာဟာ မလုံလောက် သေးဘူးလား။
2. စာဖတ်တဲ့ သူတွေကို အထင်သေးတာလား။ စာဖတ်တဲ့ သူတွေမှာ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ ဦးနှောက် မရှိတော့ဘူးလား။ [ဦးနှောက်တွေ ရှိပါတယ်။ “သူ” ပြောသမျှကို အားလုံးကတော့ လက်ခံကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံး လက်ခံလိုက်မှတော့ ခုလို ပြဿနာတောင် ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သေနတ်နဲ့ ထောက်ပြီး သူ့ဝါဒတွေကို အတင်း ယုံခိုင်းနေတာမှ မဟုတ်တာ။]
3. ကိုယ့်ဟာက ရာနှုန်းပြည့် မှန်နေပြီလို့ ထားလိုက်ပါတော့။ ဒါဆိုရင် မသိနားမလည်သေးတဲ့ သူတွေ သူ့အမှားတွေကို နားဝေတိမ်တောင် ဖြစ်သွားရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ [သူ့လိုဆန်ဆန် အတွေးမျိုးက… ဥပမာ တောင်တတောင်ဟာ ကမ္ဘာ့ပထဝီမှာ မရှိဘူးလို့ ပြောတာမျိုးက “သူ” မှ တွေးမိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုအတွေးတွေကို တခြားလူတွေလည်း တွေးမိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ သူ့ဟာကို ကိုယ့်ဘက်က ယုတ္တိခိုင်ခိုင်နဲ့သာ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် အများ အတွေးမှားနေကြတဲ့ ကိစ္စတွေကို တခါတည်း ဖြေရှင်းပြီးသားတောင် ဖြစ်သွားပါဦးမယ်]
4. ဟိုး နှစ်ပေါင်းထောင်ချီခဲ့တဲ့ ပဒေသရာဇ် ခေတ်တုန်းကတောင် အယူအဆတွေ ရောင်စုံ ဖူးပွင့်ခဲ့သေးတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဥာဏ်တော်ရှင် ဖူးပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခေတ်က ပဒေသရာဇ် ဘုရင်တွေ အခုလို ဆန်ဆန် ဖမ်းဆီးတာမျိုး ရှိခဲ့ဖူးပါသလား?
5. သူ့အနေနဲ့ နာမည်က အစ ခွဲထွက်ပြီး လုပ်ရင်ရော [ဒါဆိုရင်လည်း Holy man တပါး ရဲ့ အယူအဆတွေကို နှစ်သက်လို့ “သူ” ယူပြီး ကိုးကားတဲ့ အခါမှာ credit မပေးဘဲ ယူသုံးတယ်လို့များ စွပ်စွဲကြလေမလား။ လောကအတွက် ဖူးပွင့်လာတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင် တယောက်ရဲ့ ဝါဒတွေကို လူတိုင်းက ကိုးကားခွင့် မရှိတော့ဘူးလား။]
ရနိုင်သမျှ အချက်အလက်လေးတွေကို အခြေခံပြီး တွေးကြည့်ခြင်းဟာ ခေါင်းမူးစေတတ်တယ်ဆိုရင် အဲဒါကို မူးယစ်စေတတ်သော အရာလို့များ ပြောကြမလား။ ရှိစေတော့။ ကျနော်တွေးကြည့်ချင်သေးတယ်။
"သူ" ဘယ်သူလဲ သိချင်ရင်တော့ ကောင်းကင်ရဲ့ အရောင်ကိုသာ ကြည့်လိုက်။
(ပို့စ်တင်ထားတဲ့ တကယ့်ရက်က ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ပါ။ ကော်ပီ + ကြော်ညာပို့စ်ကို ဒါရဲ့ အပေါ်ကို ရောက်စေချင်လို့ ဒီဟာတင်တဲ့ ရက်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀ လို့ ပြောင်းထားလိုက်ပါတယ်။)
Posted by Kaung Kin Ko at 5:53 PM 15 comments: Links to this post
စွက်စွက်ဖက်ဖက် ပါးစပ်ဖျားတွေ ဆိုတာ
ရက်ရက်စက်စက် သေနတ်၊ဓါး တွေ လိုပဲ။
ဒါပေမဲ့ … အသက်ကို ရန်ရှာမယ့်အစား
အချစ်လမ်းတံတား ကျိုးပျက်သွားအောင် ဖျက်ဆီးတတ်တယ်။
လူမှု စက်ဝိုင်းဇုန်ကြီး တခုလုံး
ကွဲအက်ပုပ်ရောင် နေတာကို မြင်ရဲ့လား။
Posted by Kaung Kin Ko at 6:26 PM7comments: Links to this post
ကျနော့် ရှပ်အင်္ကျီအပြာက ဘာအရောင်လဲ?
ကျနော်ဟာ အဝတ်အစားကို ကျကျနန မဝတ်တတ်တဲ့ သူတယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါဟာ ကျနော့် အပြစ်ချည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော့် အခန်းထဲမှာ အဝတ်လဲတုန်းကတော့ ကျနော့် ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ဆွယ်တာက အရောင်ချင်း လိုက်ဖက်လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့် ကျောင်းသူလေးတွေရှေ့ရောက်တော့ အရောင်နှစ်ခုက လုံးဝ မလိုက်ဖက်တော့ သလိုပဲ။ အဲဒါကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ?
လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းနည်းကတော့ ကျောင်းသူလေးတွေကို ကျနော့် အခန်းထဲမှာပဲ စာခေါ်သင်ပေးလိုက်ရင်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါဟာ အဝတ်အစား ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်လိုက် ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာတော့ အတွေးအခေါ် ပုစ္ဆာတပုဒ် ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့် အခန်းထဲမှာ ရှပ်အင်္ကျီအပြာရဲ့ အရောင်ဟာ ဘာအရောင်လဲ?
နယူးယောက် မြို့ရဲ့ နေသာတဲ့ နွေဦး နေ့လည်ခင်း တခုမှာ ကျနော် အဲဒီ့အင်္ကျီလေးနဲ့ အပြင်ထွက်တဲ့ အခါ ကျနော့် အခန်းထဲတုန်းက အရောင်နဲ့ အနည်းငယ် ကွဲပြားသွားမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ အပြာရောင် လို့ ကျနော် ခေါ်နေဦးမှာပဲ။
ကျနော့် စာသင်ခန်းထဲက မီးရောင်အောက်မှာတော့ ကျနော့် ရှပ်အင်္ကျီလေးဟာ အပြာရောင် ပေမဲ့ ကျနော့် အခန်းထဲတုန်းက အပြာရောင်လို ကျနော့်ဆွယ်တာနဲ့ လိုက်ဖက်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ အပြာရောင် ဆိုတဲ့ စကားလုံး တူညီနေ ပေမဲ့ နဂိုတုန်းက ဆွယ်တာနဲ့ လိုက်ဖက်ခဲ့တဲ့ အင်္ကျီဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာ လိုက်ဖက်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ ရှပ်အင်္ကျီရဲ့ ဟာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ပါသလဲ။ တကယ်တော့ ဘာမှ ပြောင်းလဲစရာ မရှိပါဘူး။
တကယ်ကျတော့ ရှပ်အင်္ကျီရဲ့ အရောင်က ပြောင်းလဲ သွားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကျနော်တို့ရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာသာ အရောင် ပြောင်းလဲ သွားတယ်လို့ ထင်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ မျက်စေ့က အရောင်မှားကို မြင်စေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အရောင်နှစ်ခုမှာ ဘယ်အရောင်က အရောင်အမှား ဖြစ်ပါသလဲ?
အလင်းရောင်နည်းတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ အခန်းလေးက အင်္ကျီရဲ့ အရောင်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်နိုင်ဖို့ အနေအထား မရှိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သဘာဝ နေရောင်အောက်မှာမှ အမှန်ဆုံး အရောင်ကို သိနိုင်မှာလား။ နယူးရောက်မြို့ရဲ့ နွေဦး နေ့လည်ခင်း နေရောင်အောက်မှာ ပေါ်တဲ့ အရောင်နဲ့ လန်ဒန်မြို့ ဆောင်းတွင်း မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ပေါ်တဲ့ အရောင်ကလည်း ခြားနားနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်နေရောင်က ရှပ်အင်္ကျီရဲ့ အရောင်မှန်ကို သိဖို့ အသင့်တော်ဆုံး အခြေအနေ တရပ်ဖြစ်ပါသလဲ။ ရှပ်အင်္ကျီရဲ့ အရောင်မှန်ကို သိဖို့ သဘာဝ နေရောင်ထက် မီးချောင်းရဲ့ အလင်းက ပိုပြီး သင့်တော်တယ်လို့ရော ဘာလို့ မပြောနိုင်ရမှာလဲ။
ဒါမှ မဟုတ် ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတခုမှာ အရောင်မှန် ဆိုတာ မရှိဘူး လို့ပဲ ယူဆလိုက်ရ မလား? အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်အလင်းရောင်က ရုပ်ဝတ္တု တခုခုရဲ့ အရောင်မှန်ကို သိစေသလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ လိုတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့တုန်းဆိုတာ အရောင်မှန် ဆိုတာကို မရှိလို့ပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတခုမှာ ကြည့်မြင်ရတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး အရောင်တခုထက် ပိုပြီး ပါတယ်လို့ ပြောရမလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျနော့် ရှပ်အင်္ကျီမှာ အရောင်မှန်တွေ အများကြီး ရှိနိုင်သလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အခုတော့ ကျောင်းသူလေးတွေ အခန်းထဲက ထွက်သွားကြပါပြီ။ ကျနော့် ရှပ်အင်္ကျီအပြာက ဘာအရောင်လဲ?
(Free translation of Andrew Pessin’s essay, “True Colors”)
Posted by Kaung Kin Ko at 8:59 AM 1 comment: Links to this post
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ခဏခဏ ကြုံရတဲ့ မေးခွန်းတခုရှိတယ်။ ဘာကြောင့် တယောက်က ချမ်းသာတဲ့ မိဘက မွေးလာပြီး တခြား တယောက်က ဆင်းရဲတဲ့ မိဘကနေ မွေးလာလဲတဲ့။ တယောက်က ဉာဏ်ကောင်းပြီး တယောက်က ဘာလို့ ဉာဏ်ထိုင်းရတာလဲတဲ့။ (အဲဒါကုိုိတော့ genetics နည်းပညာနဲ့လည်း ရှင်းပြလို့ ရမှာပါ)
ဘုရားသခင် (သို့မဟုတ်) အလ္လာကို ကို ယုံကြည်သူတွေကတော့ အရာရာကို ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်လို့ ပြောကြမှာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ပြန်မေးစရာမေးခွန်းတွေ အများကြီး ရှိလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ မွေးရာပါ ဒုက္ခိတတွေကို လူ့ငရဲ ခံစားရရုံသက်သက် ဖန်ဆင်းထားတာလား?
လူတွေ တယောက်နဲ့ တယောက် မွေးကတည်းက ကွဲပြားနေမှုကို ဘာကြောင့်လဲ ဆိုပြီးတော့ မေးခွန်းမကြာခဏ ထုတ်လေ့ရှိသူတွေကတော့ အရှေ့တိုင်းဘာသာရေး တချို့ကို ယုံကြည်သူတွေ ပါပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ အဖြေကလည်း အဆင်သင့် ရှိနေတတ်တယ်။ အတိတ်ဘဝ ကံကြောင့်တဲ့။ အဲဒါ တရားမျှတမှု ရှိတဲ့ စနစ်တရပ် ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်ဟုတ်မဟုတ် မသိနိုင်တဲ့ အတွက် သိမှုပြင်ပက ကိစ္စလို့ပဲ ဒီနေရာမှာ ထားလိုက်ရအောင်ပါ။
တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ “ဘာကြောင့် တယောက်က ချမ်းသာတဲ့ မိဘက မွေးလာပြီး တယောက်က ဆင်းရဲတဲ့ မိဘကနေ မွေးလာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုက မလိုအပ်တဲ့ မေးခွန်းကြီးပါ။ တခါတလေကျ မေးသူဆီမှာ အဖြေကြိုရှိပြီးသား leading question ကြီး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
သဘာဝအရ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး မေထုန်မှုပြုရင် ကလေးမွေးလာတတ်တယ် မို့လား။ ဆင်းရဲတဲ့ မိဘက မွေးရင် ကလေးက မွေးမွေးချင်းမှာ ဆင်းရဲတဲ့သူလေး ဖြစ်မှာပေါ့။ ချမ်းသာတဲ့ မိဘက မွေးရင် ကလေးက မွေးမွေးချင်းမှာ ချမ်းသာတဲ့သူလေး ဖြစ်မှာပေါ့။ ဗီဇတွေကိုလည်း မိဘတွေဆီက အမွေရမှာပေါ့။
ကွဲပြားနေတယ် ဆိုတာက အတိတ်ဘဝကံဆိုတာ ကို လက်ခံမှ၊ သံသရာ ဆိုတာကို လက်ခံမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အံစာတုံးတွေ အများကြီးကို လှိမ့်လိုက်ရင် အံစာတုံးတွေ အကုန်လုံး ၁ ကနေ ၆ အတွင်း ကျချင်ရာ ကျနေကြမှာပဲ။ တခုနဲ့ တခု တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အံစာတုံးမှာ အတိတ်ဘဝ မရှိခဲ့တာတော့ သေချာပါတယ်။
သစ်ပင်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သစ်ပင်တွေ တပင်နဲ့ တပင် တူရဲ့လား။ သစ်ပင်တွေမှာ အတိတ်ဘဝကံ ဆိုတာ မရှိနိုင်ပေမဲ့ သဘာဝ အလျောက် တပင်နဲ့ တပင် မတူဘဲ ကွဲပြားနေကြပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ သဘာဝ အလျောက် ကွဲပြားနေမှုကို ဘယ်သူမှ မေးခွန်းပုစ္ဆာ မလုပ်ကြပေမဲ့ လူတွေရဲ့ ကွဲပြားမှုကျမှ စဉ်းစားနေကြတာပါ။
သရက်စေ့ကနေ သရက်ပင် ဖြစ်လာတာနဲ့ တခြားမျိုးစေတွေကနေ တခြားအပင်တွေ ဖြစ်လာပြီး တပင်နဲ့တပင်ကွဲပြားနေတာကို ကို ရှင်းပြဖို့ သဘာဝ တရားပဲ လိုပါတယ်။ အဲလိုပဲ ချမ်းသာတဲ့ မိဘ နှစ်ပါးကနေ ချမ်းသာတဲ့ ကလေးလေး ဖြစ်လာတာ၊ ဆင်းရဲတဲ့ မိဘကနေ ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးလေး ဖြစ်လာတာကို ရှင်းပြဖို့ သဘာဝတရားနဲ့တင် လုံလောက်နေပါပြီ။ အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ နှင်းဆီပင်မှာ သဘာဝ အလျောက် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်တွေ ချို့တဲ့ နေနိုင်သလို အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ လူသားလေးမှာလည်း သဘာဝ အလျောက် တခုခု ချို့တဲ့နေနိုင်ပါတယ်။
အတိတ်ဘဝကံကို ယုံကြည်သူ ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို ယုံကြည်သူ ဖြစ်စေ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ မယုံကြည်သူကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် မယုံကြည်ဘဲ နေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ … ယုံကြည်တာ မယုံကြည်တာက ပြဿနာ မရှိလှပေမဲ့ နှုတ်က ထုတ်ပြောလိုက်ရင် [တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင်တော့] ပြဿနာ တက်တတ်ပါတယ်။ မွေးကတည်းက နိမ့်ပါးတဲ့သူကို၊ မွေးကတည်းက ကံမကောင်းတဲ့သူကို ဒီကောင် အရင်ဘဝက မကောင်းတာ လုပ်ခဲ့လို့ ဖြစ်တာ ဆိုတာက သူတို့ စံအရတော့ prejudice လုပ်ခြင်းပါ။ blaming the victim လို့လည်း သူတို့စံနဲ့ ပြောမှာပါပဲ။
ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့တဲ့သူတွေဟာ အရင်ဘဝက မကောင်းမှု လုပ်ခဲ့သူတွေလို့ ပြောခဲ့တဲ့ အတွက် ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်တုန်းက အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်း နည်းပြ Glenn Hoddle ဟာ နည်းပြ ရာထူးကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရဖူးတာက အထင်ရှားဆုံး သာဓက တခု ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 12:46 AM 14 comments: Links to this post
ဤသို့သော ပျော့ကွက်ဟာကွက်မျိုးကို၊ အမေရိကန်တွေက ‘လူကြီးသူငယ်နာ ရောဂါ’ ဟု ခေါ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်လည်း အသက်ကြီး အချိန်မစီးသည့် ကလေးပေါကြီးတွေ ပေါမှပေါ ဖြစ်လေရာ၊ သူတို့ပြောသော ရောဂါအမည်နှင့် အဟပ်ညီမည်ထင်ပါသည်။
သို့သော် အဆိုပါရောဂါ ဆိုသည်ထက်၊ အသိပညာအရာတွင် ကလေက၀နိုင်မှုနှင့် ပို၍ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ ဤလို ရောဂါမျိုး ဖိစီးနှိပ်စက်ခံနေရသည့် မြန်မာလူမျိုး အရေအတွက်သည်ကား၊ ပို၍ပို၍ များလာဟန် ရှိပါသည်။ ထားတော့…၊ ဤချို့ယွင်းအားနည်းချက် (ဆိုကြပါစို့ ရောဂါ) ဆိုသည်မှာ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည်း။ ဤရောဂါက ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာတွေကို ဘယ်သောင်ဘယ်ကမ်း ဆိုက်စေမည်နည်း…။
‘ငါ့အိမ်က မင်းအိမ်ထက် ပိုကြီးသကွ’
‘ငါ့အဖေက မင်းအဖေကို အသာလေးနဲ့ နောက်ကောက်ချနိုင်တယ် မောင်’ စသဖြင့်။
ဦးရွှေက သူ့ဇနီးအတွက် ရွှေဘီးတစ်ချောင်း လုပ်ပေးသောအခါ၊ အိမ်နီးချင်း ဦးငွေက အားကျမခံ သူ့မိန်းမကို စိန်ဘီး လုပ်ပေးသည်မှာ အဆိုပါ ဖော်ပြချက်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ထက် တစ်ဆင့်တက်လာသောအခါ ပိုဆိုးလေသည်။
‘ဟေ့ ငါတို့ မြန်မာဘုရင်တွေက ယိုးဒယား၊ အာသံနဲ့ မဏိပူရကို နိုင်ခဲ့တာကွ၊ ဘာမှတ်လဲ…’ စသဖြင့်။
‘ဟိတ် အတန်းထဲမှာ ငါ အတော်ဆုံး၊ ငါအလိမ္မာဆုံးကွ’ ဆိုသည့် ကလေးစကားနှင့် ဘာကွာတော့မည်နည်း။
လူဦးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံတွင် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်စရာ ဘုရားကျောင်းကန်တွေ အခြားမည်သည့် တိုင်းပြည်ထက်မဆို ပိုများသည်။ သို့နှင့်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့တတွေ၏ ဘာသာရေး အဆုံးအမများ အပေါ် စောင့်ထိန်းလိုက်နာမှုမှာ အားနည်းလှသည်ဟု ဆိုချင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာတရားက ဘုန်းတော်ကြီးများကို လောကီရေးတွင် ၀င်မစွက်ရန် တားမြစ်ထားသေးသည်။ သို့သော် အငြိမ့်ပွဲ ဇာတ်ပွဲတွေ သွားကြည့်ပါက ၀ါဝါ၀င်းဝင်းတွေ မမြင်ချင့်အဆုံး ဖြစ်တော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံမှာ သယံဇာတ ပေါကြွယ်သည်ဟု နာမည်ကြီးသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့တတွေကား ‘ဆီကို ရေချိုး၊ ဆေးရိုးမီးလှုံ’ ဟုဆိုကာ ဖြုန်းတီးမှုကို အဟုတ်ကြီး ထင်နေကြသည်။ ဘာကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်နေပါသနည်း။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ နို့စို့ကလေးဘ၀မှ မတက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
နို်င်ငံခြားသားတို့၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံများနှင့် ပတ်သက်လျှင်လည်း အတုယူ နည်းယူစရာ ရှာမကြည့်တတ်။ အထင်သေး ရှုတ်ချကြသည်က များသည်။ ပြောရလျှင် အစစအရာရာ ကျွန်ုပ်တို့တတွေမှာ အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးစ်ိတ်နှင့် လူကြီးကိုယ်တွေ ဖြစ်နေတော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ ရောက်လာကြသော နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များက ကျွန်ုပ်တို့ကို သဘောကျကြပါသည်။ ‘နက်ဖြန်ခါ အတွက်ပင် တွေးမပူတတ်သော ပျော်ပျော်နေသေခဲ လူမျိုး’ ဟုလည်း မကြာခဏဆိုသလို ပြောတတ်ကြသည်။ ဤကောက်ချက်မျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့က ဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်နေကြသည်။ လူကြီးတစ်ယောက်၏ မြှောက်ပင့်စကားကို ကျေနပ်ပီတိဖြာနေသော ကလေးလေးတစ်ယောက်နှင့်ပင် တူသေးတော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာသက ရိုးတာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စကားက ပေါ့ပြက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အတွေးက တိမ်သည်။ သင့်,မသင့် မှန်,မမှန် ကိုယ်တိုင် မစဉ်းစား။ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမည့် အလုပ်ကို ဆရာတော်များနှင့် ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများကိုသာ လွှဲထားသည်။ ကလေးတွေနှင့် ဘာကွာတော့မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးမှာ စံသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း အလွန်ကိုးကွယ်လေ့ ရှိပါသည်။ သို့သော် ‘စံ’ အတိုင်းကား မကျင့်။ ကျင့်သယောင်ယောင် ဆောင်ကြသည်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဆန်းစစ်ဝေဖန်သည်မျိုး အလျှင်းမရှိ။ သူများ အထင်သေးမှာ ကြောက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာလည်း ဤနည်းနှင်နှင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အကျင့်က နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးကို ကြိုက်မကြိုက်ဆိုသည်နှင့်သာ ဆုံးဖြတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်သာ ချိန်ဘာလိန်လို အရည်အချင်းမျိုး ရှိသည့် နိုင်ငံရေးသမားမျိုးရှိလျှင် သူ့သက်တမ်းမှာ ခြောက်လထက် ပိုမခံ။ မြန်မာတွေက အရည်အချင်းထက် သူ့တို့ဟာဒယကို ထိ,မထိသာ ကြည့်တတ်သည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကကို ကြည့်လိုက်လျှင်လည်း သတင်းစာများအတွက် သတင်းဖြစ်ရုံမျှထက် ဘာမျှမပို။ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေကြသည်က များသည်။ ပါတီနှစ်ခုရှိလျှင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မည်။ အဆဲကောင်း အတိုက်ကောင်းလျှင် နာမည်ကြီးမည်။ အစိုးရကို နာနာဆဲနိုင်ပါက ပိုလူကြိုက်များလိမ့်မည်။ မြန်မာဓလေ့တွင် အစိုးရ(မင်း)ကို ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲ ထည့်သွင်းထားသည် မဟုတ်ပါလော။
‘သားရေ- သမီးရေ ဟိုကလေးနဲ့ မကားစားကြနဲ့နော်၊ ဒင်းတို့တတွေက အဆင့်အတန်း မရှိဘူးကွဲ့’
‘ဦးချမ်းသာနဲ့ ဒေါ်ပို်က်ဆံကို သိသမို့လား။ ဒီလိုမြို့လေးမှာ သူတို့ဘယ်နေနိုင်မလဲ။ သူတို့ ကလေးတွေအတွက် ပေါင်းစရာ မရှိဘူးတဲ့လေ။ သူတို့အိမ်နီးချင်းတွေက စာရေးစာချီနဲ့ ကျောင်းဆရာတွေကိုးရှင့်…’ စသည်ဖြင့်။
ဤသည်တို့မှာ မြန်မာတစ်ဦး၏ မြန်မာလူမျိုးများအပေါ် အမြင်များ ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပျက်ဖို့ ရေးလိုက်သည် မဟုတ်။ သိမှတ်လက်ခံပြီးသကာလ ဘာ့ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရသည်ကို၊ အကြောင်းရှာစိစစ်ကြဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့လုပ်နိုင်လျှင် ရောဂါတစ်ဝက် ကုသပြီး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဦးသန့် (Facebook group တခုတည်းကနေ ပြန်ဝေမျှတာပါ။)
Posted by Kaung Kin Ko at 11:43 AM2comments: Links to this post
"သူ" ဘယ်သူလဲ သိချင်ရင်တော့ ကောင်းကင်ရဲ့ အရောင်ကိုသ...